नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँचीको नेतृत्व सहमतीमा चयन हुने सम्भावना कती ? - जिल्ला
नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँचीको नेतृत्व सहमतीमा चयन हुने सम्भावना कती ?
भिम बिसि २८ कार्तिक, २०७८
अर्घाखाँची । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको मिति नजिकिदै गर्दा अर्घाखाँचीमा चहलपहल पनी बढ्दो छ । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिदै जाँदा नयाँ नेतृत्वका लागि आकांक्षीहरु आआफ्नो तयारीमा छन् ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व लिन अहिलेसम्म जिल्लामा चार जना अग्रसर देखिएका छन् । वर्तमान सभापती बिष्णुप्रसाद खनाल मुस्कान, महासमिती सदस्य केशब श्रेष्ठ, नेपाल शिक्षक संघका जिल्ला अध्यक्ष यादव घिमिरे र महाधिवेशन प्रतिनिधी ईन्द्रमणी पौडेलले सभापतीमा दावी गरेका छन् । महाधिवेशनमा आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने उद्देश्य अनुरुप अहिलेदेखि नै सभापतिका चारै जना आकांक्षीहरु मैदानमा छन् । आफ्ना एजेण्डा सहित उनीहरु क्षेत्रिय प्रतिनिधी, वडा कार्यसमिति तथा आम कार्यकर्ताका बिचमा छन् ।
सभापतिका अतिरिक्त पाँच उपाध्यक्ष, चार सचिव, चार सहसचिवका उम्मेद्वारहरु पनी मैदानमा छन् । आम कांग्रेसीजनहरुको मनसाय सर्वसहमत नेतृत्व चयन हुनुपर्छ भन्ने छ । सहमतीमा नेतृत्व छनौट गर्ने तथा सन्तुलित रुपमा पार्टीपंक्तिको कमजोरी सुधार्दै संगठन मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण कुरा रहेको क्रियाशिल सदस्यहरुले बताउने गरेका छन् । तर, जिल्लाको नेतृत्व सर्वसहमत बन्ने देखिदैन । उम्मेद्वारहरु बिचको रस्साकस्सीले सहमतीमा नेतृत्व छनौट हुने कुनै छाँटकाट छैन ।
सभापतीका चारै जना आकांक्षीहरुलाई १४औं महाधिवेशनमा जिल्लाको नेतृत्व सर्वसहमत हुने सम्भावना कती छ भनेर सोधेका छाै ।
सभापतीका आकांक्षीहरुले के के भने ?
केशब श्रेष्ठ:- सहमतीको सम्भावना एकदम न्युन छ, १४औं महाधिवेशन सर्वसहमत गराउन पनी हुँदैन अहिले । नेतृत्व पंक्ति जनताबाटै अनुमोदित भएर आउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा धेरैले भोट दिए जित्ने हो, कमले भोट हाले हार्ने हो । एकतन्त्रिय शासन जस्तो, हुकुमी हासन जस्तो होईन जनताको दैलोमा जाउँ, जनमतमा जाउँ । जनताले जस्लाई चुन्छ उही सभापती हुन्छ ।
ईन्द्रमणी पौडेल:- अर्घाखाँचीको हकमा सभापती हामी चार जना छौं । चार जनामा सहमती गर्ने हो भने सबै पदमा सर्वसहमत हुनुपर्छ भन्ने हो । मिल्ने हो भने ‘Top to Bottom’ मिल्नु पर्छ । ५७ जनाको चुनाव हुँदैछ, सबै पदमा सर्वसहमत हुनुपर्छ र त्यसो भयो भने म अर्घाखाँचीको नेतृत्वमा बाधक बन्दिन । अर्घाखाँचीको कांग्रेस सुदृढिकरण गर्न, यहाँको कांग्रेसलाई राम्रो बनाउन, बलियो बनाउनका लागी म बाधक बनेर बस्दिन । तर, सहमती सबै पदमा हुनुपर्छ त्यसमा म सहमती गर्न तयार छु । अन्यथा सभापतीमा मात्र सहमती गर्ने अन्य पदहरु लथालिंग पारेर सहमती हुन सक्दैन । अनौपचाकि छलफलहरु बस्ने, बार्ता बस्ने भै राखेको छ । त्यस्तो निष्कर्ष निस्कने केही भएको छैन ।
यादव घिमिरे:- सर्वसहमत भनेको प्रतिस्पर्धात्मक, मित्रवत निर्वाचनको समाप्ती पछी गठन हुने कार्यसमिती सिंगो कांग्रेसको आदर्श र मियोंको आधारमा चल्ने भएकोले त्यसपछी बल्ल सर्वसहमत रुपमा प्रस्तुत हुन्छ । निर्वाचन अँघी सर्वसहमत हुनै कुनै सम्भावना छैन ।
बिष्णु मुस्कान:- नेपाली कांग्रेसको १४औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत अर्घाखाँची जिल्लाको अधिवेशन पनी मंसिर ६ गतेका दिन गर्दैछौं । यो अधिवेशनमा जिल्ला सभापतीका आकांक्षीहरु, जिल्ला पदाधिकारीका आकांक्षीहरु, अन्य पदका आकांक्षीहरु बिचमा तिव्र प्रतिस्पर्धा छ । सबै साथीहरुले आआफ्नो ढंगले प्रचारप्रसारलाई तिव्रता दिनुभएको छ । त्यो भन्दा अँगाडी ३ गते क्षेत्रिय अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने छौं हामीले । जिल्ला कार्यसमितीले क्षेत्रिय अधिवेशनलाई सर्वसहमत रुपमा टुङ्गाउने तयारी गरेको छ, प्रयासहरु गरिरहेको छ, साथीहरुको बिचमा छलफल, संवाद भईरहेको छ । चहाना, ईच्छा, आकांक्षा धेरै साथीहरुको छ त्यसैले निर्वाचन मै जाने सम्भावना देखिन्छ । सहमतीको सम्भावना कम देखिएको छ । पार्टीको तर्फबाट सहमतीमा जनुपर्छ भन्ने ढंगले सभापतीको हैसियतले मैले प्रयास गरिरहेको छु ।
सभापतीका चारै जना आकांक्षीहरुको कुरा सुन्दा सहमतीको सम्भावना न्युन देखिन्छ । आकांक्षीहरु धेरै अँगाडी बढीसकेका छन् । कांग्रेसको संस्कार प्रजातान्त्रिक पद्दती अनुसार निर्वाचन हुने सम्भावना अत्याधिक देखिन्छ । कुनै चमत्कार नभए सभापति सहित अन्य पदमा मंसिर ६ गते निर्वाचन नै हुने देखिएको छ ।